जेसीबीको ‘अपरेटर मिट’ इटहरी
काठमाडौं । नेपालका लागि जेसीबी कन्स्ट्रक्स एन्ड हेभि इक्विपमेन्टको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्राइभेट लिमिटेडले इटहरीमा ‘अपरेटर मिट’ आयोजना गरेको छ । हेभि इक्विपमेन्टका अपरेटरहरुलाई जेसीबी...
फेरि आयो कोका–कोला मोःमोत्सव
काठमाडौ । गत वर्षको मोःमोत्सवको सफलतापछि, कोका–कोलाले आफ्ना महत्वपूर्ण उपभोक्ताहरुको लागि मोःमोत्सव फेरी ल्याएको छ । यस बर्षको मोःमोत्सव महोत्सव बुधबारबाट शुरु भईे मध्य मार्चसम्म हुनेछ । अभियानको एक ...
एनआईसी एसियाले ल्यायो ग्राहकमाझ धनवर्षा मुद्दती योजना
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बंैकले व्यक्तिगत ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी हालै ल्याएको ूधनवर्षा मुद्दती खाता प्रति ग्राहकहरुको चासो बढेको भन्दै सीमित संस्थागत ग्राहकहरुका लागि समेत यो सेवा उपलब्ध गराएको छ । ...
अझै भुक्तानी भएन अपार्टमेन्टको बिमा दाबी, अपार्टमेन्टमा बस्नेको संख्या घट्दो
काठमाडौँ, २६ माघ । भुइँचालोबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी नपाउँदा बिमितहरुलाई समस्या भइरहेको छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएको २२ महिना बितिसक्दा पनि अपार्टमेन्टका बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् ...
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकहरुले आफुले छानेको एउटा विषेश नम्बरमा अब अझ सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्नेछन् र रिङ ब्याक टोनमापनि ५०% छुटको मजा लिन सक्नेछन् । आज बुधबार देखि लागु हुने गरी जिएसएम मोबाइल सेवाप्रदा...
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले एक महिना लामो एक्स्क्ल्युसिभ स्कुटर क्याम्पेन सुरु गरेको छ । यो अवधिमा यामाहाको फेसिनो र रे जेडआर स्कुट...
सून-चाँदीमा भएको कालोबजारी अन्त्य नगरे आमरण अनशन बस्ने चेतावनी
काठमाडौ । सुन चाँदी व्यवसाय पीडित संघर्ष समितिले सुनमा भएको कालोबजारी अन्त्यका लागि सरकारसामु पाँचबुँदे माघ अघि सारेको छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर सुन चाँदीमा द...
प्रिपेड मोवाईलमा शनिवारदेखि फोर जि
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भोलि शनिबारदेखि जीएसएम प्रिपेड ग्राहकलाई पनि फोर(जी सेवा दिने भएको छ । पोष्टपेडमा फोर(जी दर्ता गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्दै गर्दा टेलिकमले फोर(जी सेवा दिन लागेको हो । काठमाडौं...
महिन्द्रा टू व्हीलरद्वारा दशैं स्किमको बम्पर विजेतालाई ५ लाख नगद उपहार
महिन्द्रा टु–व्हीलर्स् लि. (MTWL) को आधिकारिक वितरकको रुपमा महिन्द्रा बाइक तथा स्कुटरहरुको विक्रीवितरण गर्दै आइरहेको अग्नि मोटो इन्क प्रा. लि. ले गत अश्विन महिनाको दशैं क्याम्पेन अन्तर्गत ल्याएको “महि...
जनता बैंकले पायो नयाँ अध्यक्ष
काठमाडौं । जनता बैंकले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ । बैँकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले गत माघ १४ गते व्यक्तिगत कारण देखाउँदै दिएको राजिनामा स्वीकृत गर्दै बैँक संचालक समितिले केशबबहादुर रायमाझीलाई नयाँ अध्...
काठमाडौँ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको म्याद ३४ महिना थप भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बुधबारको बैठकले...
भारतबाट ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न साल्ट्र ट्रेडिङको प्रस्ताव
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले नेपालमा उत्पादित चिनीले बजारको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै यो वर्ष ५० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्ने तयारी गरेको छ । कर्पोरेशनले भारतबाट ५० हजार मट्रिक टन चिनीका लागि...
पाँच अर्ब लगानी गर्दा वार्षिक सवा अर्बको पुष्प निर्यात हुने
काठमाडौं । नेपालको पुष्प निर्यात गर्न कम्तिमा सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ग्रिन हाउस निर्माण गर्नुपर्ने पुष्प बिज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । पुष्प व्यवसायीहरुको छाता संगठन फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपाल(फ्यान)ले ...
काठमाडौं १६ माघ । यसकारण तरलता अभाव १. मंसिर मसान्तको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप रकम २० दशमलव ६ प्रतिशत बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार ३०...
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन शुक्रवार विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कुल ३७ ...
काठमाडौं जिएसएम मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ । यस अन्तर्गत एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले अब एनसेल नेटवर्क भित्र अझ सुलभ दरमा एसएमएस स...
काठमाण्डौ । द्वन्द्वको समयमा विस्थापन भएका सरकारी बैंकका शाखा तुरुन्त पुनःस्थापना नहुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको गुनासोसमेत बढी रहेकाले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रालयले सरकारी बैंकलाई निर्दे...
सेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा आजको नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । लगातार ओरालो लाग्दै आएको बजार आज थप ओर्लिएर एक हजार ३७५ बिन्दुमा आइपुगेको छ । क वर्गका कम्पनीको सेयर मापन गर्ने सेन्सेटिभ...
लाइफ अटोमोबाइलको‘गेट मोर विथ पुन्टो प्युअर’सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि फियाट्को आधिकारिक विक्रेता लाइफ अटोमोबाइल प्रा. लि.ले बुधबार आफ्नो नयाँ स्किम –‘गेट मोर विथ पुन्टो प्युअर’ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ स्किममा लाइफ अटोमोबाइलले फियाट् पुन्टो प्युअ...
१३ हजार ९९० मूल्यको ग्यालाक्सी जे टू एस बजारमा, फोर जी चल्ने
काठमाडौं । सामसङले आफ्नो जे सिरिजको रेन्जमा नयाँ ग्यालाक्सी जे टू एस ल्याएको छ । सुपथ रेन्जका फोनहरुको वर्गमा सामसङ ग्यालाक्सी जे सिरिज सबैभन्दा बढी विक्रिहुने स्मार्टफोन सिरिज हो । ग्यालाक्सी जे ट...